အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း - ခရမ်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ရှိစိတ်ကူးများ အနုပညာအာရုံ - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ
ထောင့် D-shaped မီးဖိုချောင်၏ဓါတ်ပုံများ
kitchen ည့်ခန်း၏မီးဖိုချောင်နှင့်ထမင်းစားခန်းနှင့်အတူ - ပရိဘောဂစိတ်ကူးများ
white ည့်ခန်း၏အဖြူရောင်၊ အ ၀ ါရောင်နှင့်အညိုရောင်
တီဗီနံရံကပ်ဓာတ်ပုံများ - တီဗီနောက်ကွယ်မှနံရံနောက်ကွယ်ရှိအတွေးအခေါ်များ
ခရမ်းရောင် the ည့်ခန်း၏ပုံများ
အိုင်ဗင် Dimitrov ......... ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
အန်ယာဂေါ်ရီဗာ………။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
Steli Nikolova ………။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
Stefka Anestieva Yu ။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
Boryana Georgieva ………။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
Steisi An ………။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
Kalinka Stoilova ....... ။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
Desi Ivanova ………။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
Asia Doikova ………။ ပါဝင်သူများ၏ဓာတ်ပုံရွေးချယ်ခြင်း "My
နွေ ဦး အလှဆင်
ဆောင်း ဦး ရာသီအလှဆင်
မြန်၊ လွယ်၊ အရသာ!
Spaghetti / ခေါက်ဆွဲ
Bora အဘိဓါန် Bora အဘိဓါန်
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း - ခရမ်းရောင် - ခရမ်းရောင်ရှိစိတ်ကူးများ
12.08.2019 Posted by: အနုပညာ Senses
ည့်ခန်း, မူလစာမျက်နှာ, အတွင်းပိုင်း, အတွင်းပိုင်းရှိအရောင်များ
ဤနေရာတွင်ခရမ်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်အရောင်များဖြင့်ပြသထားသည့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၏အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေးခေတ်လူသားများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သူအချို့ကိုအာရုံစိုက်မည်။ မျက်မှောက်ခေတ်နည်းပညာများသည်သန်းနှင့်ချီသောကွဲပြားသောအရောင်များကိုရရှိရန်လွယ်ကူစေပြီးခရမ်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်အရောင်များကိုခြွင်းချက်မရှိထားသော်လည်းများစွာသောသူတို့၏သင်္ကေတနှင့်ဆွဲဆောင်မှုသည်မပြောင်းလဲပါ။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောအဝတ်အထည်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ဖက်ရှင်ပုံစံများနှင့်အိမ်အတွင်းပိုင်းအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအကြံဥာဏ်များကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သောအသွင်အပြင်များတွင်ထင်ဟပ်နိုင်သည်။
နှင့်အတူအလှဆင် Ideas နံရံနှင့်ပရိဘောဂစတစ်ကာများ.
ခရမ်းရောင်အတွင်းပိုင်း, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက်စိတ်ကူးများ, room ည့်ခန်း၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ခရမ်းရောင်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, တိုက်ခန်းတစ်ခန်း၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, room ည့်ခန်း၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, အတွင်းပိုင်း၌အရောင်များ, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးများ, ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, ခေတ်သစ်အိမ်, အလှဆင်အတွေးအခေါ်များ, အနုပညာစိတ်ကူးများ
တောက်ပသောအရောင်များနှင့်လတ်ဆတ်သောစတိုင်ပေါင်းစပ်ထားသောထမင်းစားခန်းကိုအသွင်ပြောင်းပါ။ အနုပညာသော့ခတ် Locker နှင့် ...
Tuscany ရှိဗိသုကာ Daniele Bedini ၏လှပသောကျေးလက်အိမ်။ အိမ်အား ...
အနည်းငယ်မီးဖိုချောင်စိတ်ကူးများ။ ဤမီးဖိုချောင်အမျိုးအစားတွင်ကျက်သရေနှင့်နွေးထွေးမှုရှိသည် ...
သင့်ကိုယ်ပိုင်သစ်သားပြားကိုသေတ္တာများမှပြုလုပ်ပါ။ အစ္စရေး ...
ဤလက်တွေ့ကျပြီးအလွန်အသုံးဝင်သော living ည့်ခန်းသည်မူရင်းသဘောတရား၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Wall Stickers နှင့်အိမ်အလှဆင်
အနုပညာစတူဒီယို - စွန်းဖန်
Barboleta atelier - ထိုးပြီးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မော်ကွန်းတိုက်ကိုရှာပါ - လရွေးချယ်ပါ - Xပြီလ 2021 မတ်လ 2021 ဖေဖော်ဝါရီလ 2021 ဇန်နဝါရီလ 2021 ဒီဇင်ဘာလ 2020 နိုဝင်ဘာလ 2020 အောက်တိုဘာ 2020 စက်တင်ဘာ 2020 ဇူလိုင်လ 2020 ဇွန် 2020 မေလ 2020 Xပြီလ 2020 မတ်လ 2020 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 ဇန်နဝါရီလ 2020 ဒီဇင်ဘာလ 2019 နိုဝင်ဘာလ 2019 အောက်တိုဘာ 2019 စက်တင်ဘာ 2019 သြဂုတ်လ 2019 ဇူလိုင်လ 2019 ဇွန် 2019 မေလ 2019 Xပြီလ 2019 မတ်လ 2019 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 ဇန်နဝါရီလ 2019 ဒီဇင်ဘာလ 2018 အောက်တိုဘာ 2018 စက်တင်ဘာ 2018 သြဂုတ်လ 2018 ဇူလိုင်လ 2018 ဇွန် 2018 မေလ 2018 Xပြီလ 2018 မတ်လ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 ဇန်နဝါရီလ 2018 ဒီဇင်ဘာလ 2017 နိုဝင်ဘာလ 2017 အောက်တိုဘာ 2017 စက်တင်ဘာ 2017 သြဂုတ်လ 2017 ဇူလိုင်လ 2017 ဇွန် 2017 မေလ 2017 Xပြီလ 2017 မတ်လ 2017 နိုဝင်ဘာလ 2016 ဇူလိုင်လ 2016 ဇွန် 2016 မေလ 2016 Xပြီလ 2016 မတ်လ 2016 ဇန်နဝါရီလ 2016 ဒီဇင်ဘာလ 2015 နိုဝင်ဘာလ 2015 အောက်တိုဘာ 2015 စက်တင်ဘာ 2015 သြဂုတ်လ 2015 ဇူလိုင်လ 2015 ဇွန် 2015 မေလ 2015 Xပြီလ 2015 မတ်လ 2015 ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 ဇန်နဝါရီလ 2015 ဒီဇင်ဘာလ 2014 နိုဝင်ဘာလ 2014 အောက်တိုဘာ 2014 စက်တင်ဘာ 2014 သြဂုတ်လ 2014 ဇူလိုင်လ 2014 ဇွန် 2014 မေလ 2014 Xပြီလ 2014 မတ်လ 2014 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 ဇန်နဝါရီလ 2014 ဒီဇင်ဘာလ 2013 နိုဝင်ဘာလ 2013 အောက်တိုဘာ 2013 စက်တင်ဘာ 2013 သြဂုတ်လ 2013 ဇွန် 2013 မေလ 2013 Xပြီလ 2013 မတ်လ 2013 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 ဇန်နဝါရီလ 2013 ဒီဇင်ဘာလ 2012 နိုဝင်ဘာလ 2012 အောက်တိုဘာ 2012 စက်တင်ဘာ 2012 သြဂုတ်လ 2012 ဇူလိုင်လ 2012 ဇွန် 2012 မေလ 2012 Xပြီလ 2012 မတ်လ 2012
Art Senses သည်အတွင်းပိုင်းနှင့်ဥယျာဉ်အလှဆင်ခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးသစ်များကိုဖော်ပြမည့်အီလက်ထရောနစ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ အိမ်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စိတ်ကူးများ။
ထူးခြားသောစတိုင်နှင့်ကြော့ရှင်းမှု၊ တမူထူးခြားသည့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်နွေးထွေးမှု၊ အရောင်များနှင့်ပုံသဏ္betweenာန်များအကြားသဟဇာတဖြစ်မှုကိုခံစားပါ။ အိမ်တစ်ခုချင်းစီသည် individual ည့်သည်များအားစွဲမှတ်စေပြီး၎င်း၏တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သာယာသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောနေရာဖြစ်လာနိုင်သည်။
Satto Art Gallery သည်အွန်လိုင်းပြခန်းတစ်ခုတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စွန်းဖန် и ပန်းချီကားများ.
အနုပညာစတူဒီယို Satto - စာရေးသူ၏စွန်းထင်းသောဖန်ခွက်။ ပန်းချီဖန်။
အကယ်၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သဘောထားသည်ကုမ္ပဏီ၏အတွေးအခေါ်ဖြစ်လျှင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အမြင်သည်အလုပ်သစ်သို့ချဉ်းကပ်ရာတွင်အဓိကစကားလုံးများဖြစ်သည်။ အတွက် ဦး စားပေး Satto အနုပညာစတူဒီယို ထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အမှတ်တရအနုပညာလက်ရာတွေဖန်တီးရာမှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရသာကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ပါ။
Satto Art Studio အကြောင်း»
Stained Glass ဆိုသည်မှာဆေးသုတ်ထားသောဖန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးစွန်းထင်းသောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးစွန်းထည်တစ်လုံးစီကိုမိတ္တူတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။ စီမံကိန်းကိုတစ် ဦး ချင်း ဦး စားပေးမှုများအရဆုံးဖြတ်ပြီးအတွင်းပိုင်းနှင့်လုံးဝကိုက်ညီသည်။
© 2012-2021 © အနုပညာအာရုံ - အိမ်နှင့်ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ
သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ကြော်ငြာ